septembre 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
Publié le 27 septembre 2020 25 octobre 2020
Alahady 27 septambra 2020
“MIASA AMIN'NY FAHATAHORANA AN'ANDRIAMANITRA”
Alahady hitondrana am-bavaka ny katekomena “MIJORO”
Faha 16 FFP
Alahady natokan’ny Fiangonana hitondrana am-bavaka ny katekomena “MIJORO” ity. Alahady faha 16 manaraka ny Trinité, alahady hitondra am-bavaka koa ny FFP ary alahady mamarana ny lohahevitra « Miasà amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra » izay nobanjinina nandritra ny volana septambra.
Ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 10 ora no taterina eto izao.
RAKOTOVOLOLONA Lova, mpampianatra katekomena, no nitarika ny fotoana ;
RAZANAMPARANY Clément :
Loholona, Filohan’ny FMKS sady koa mpampianatra katekomena no nitondra ny hafatra. Litorjia endriny fahatelo no notanterahana.
Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny Salamo 22 : 22-26.
Ny hira FFPM 240 : 1-3 “ALAHADY, ANDRO TSARA” no nohiraina nanarak’izany ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fiderana. Nisaotra an’Andriamanitra tafavory eto ary nangataka ny Fanahy Masina ka izay rehetra atao eto dia ho voninahitr’Andriamanitra avokoa.
Nisy feon-javamaneno fohy
FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA
RAHARINTSALAMA Hantanirina, mpampianatra ao amin’ny K2, no nitondra ny hafatra. Koa ny Tenin’Andriamanitra noraisina tamin’izany dia ny Matio 5:45a : “Mba ho tonga zanaky ny Rainareo izay any an-danitra ianareo”
Inona moa ny toetra tokony ananana mba ho tonga zanak’Andriamanitra ? Tantaran’i Koto izay nangataka zavatra tamin’ny ray aman-dreniny nefa tsy nahazo no nentiny tamin’izany. Rehefa tsy nahazo izay nangatahiny i Koto dia lasa nangalatra.
Nosamboron’ny polisy nefa tsy tratra. Nandeha nitolo-tena, nangataka tamin’ny polisy ny dadany hisolo an’i Koto. Fantatr’i Koto izany ka nalahelo sy nanenina izy. Ny toetran’ny dadan’i Koto dia tahaka ny toetran’i Jesoa Kristy : manetry tena, tsy mamaly ratsy, mamonjy ny olona ao anaty andro sarotra, mifampivavaka mandrakariva.
Nitsangana ny Sampana Sekoly Alahady rehetra nanao ny Hira FFPM 779 :3 “MAMINDRA FO AMINAY” nofaranana tamin nofaranana tamin’ny vavaka fisaorana an’i Jesoa noho ny famindrampony.
Natao avy hatrany ny hira FFPM 212 : 1-2 “VELONA SY MAHERY NY TENIN’ANDRIAMANITRA” mialoha ny vakiteny .
Ireo mpianatra katekomena no nivavaka sy namaky ny Soratra Masina. Novakiana misesy ny perikopa voalahatra ao amin’ny Mpitoriteny 8:9-13 ; Marka 12:1-12 ; ITim 1: 5-11.
Natao ny hira FFPM 226 “TOMPO Ô ! MBA TE-HIHAONA” mialohan’ny toriteny.
Ny Teny nangalana ny hafatra dia ny Mpitoriteny 8 : 12-13. Novakiana izany andinin-tSoratra Masina izany « Eny, fa na dia manao ratsy injato aza ny mpanota ka ela velona ihany, dia fantatro kosa fa hisy soa ho an’ izay matahotra an’ Andriamanitra, dia izay matahotra eo anatrehany. Fa tsy hisy soa ho an’ ny ratsy fanahy; fa ho toy ny aloka izy ka tsy haharitra ela, satria tsy matahotra eo anatrehan’ Andriamanitra. »
Ny fahendren’ny olona dia miankina amin’ny zavatry ny tany. Mila miverina amin’Andriamanitra ny olona. Tsinontsinona izay rehetra ety ambany masoandro. Mila mahay manavaka izay avy amin’Andriamanitra sy ny tsy avy Aminy.
Ankehitriny, ny mahamaika ny olona dia ny hahatonga ny fiainany ho tsaratsara hatranay. Ny maha olombelona azy no jereny. Soa fa teo ny Tenin’Andriamanitra misarika ny sain’ny olona hoe misy soa izay matahotra an’Andriamanitra.
1- Tsy misy mahalala ny fotoampitsaran’Andriamanitra
2- Ny tahotra an’Andriamanitra no mitondra ny olona ho amin’ny fahavelomana
Mila mivonona hatrany isika. Ny fitiavan-tena dia miteraka faharatsiana. Ankehitriny tsy mifampitsinjo intsony ny olona fa atao izay hahazoana voninahitra sy harena. Hita ao amin’ny Salamo 73:1-3.
Araka ny Filazantsaran’i Marka, mihevitra ny ratsy fanahy fa tsy ho faty, matoky tena ka mihevitra ny ho ela velona.
Ry katekomena, nisafidy ny hanara-dia ny Tompo ianareo ka aza mety ho voarebirebin’ny akanga tsara soratra. Maro ny fampianaran-diso ankehitriny.
Aza manamari-tena. « Lozan’ izay milaza ny ratsy ho tsara ary na tsara ho ratsy! Izay manao ny maizina ho mavaza ary ny mazava ho maizina! Izay manao ny mangidy ho mamy ary ny mamy ho mangidy » Isaia 5:20
Manana ny fotoanany Andriamanitra. Manome malaka ny olona hisafidy Izy. Misy fotoanany ny zavatra rehetra nefa rehefa tongabny fotoanan’Andriamanitra dia aza tratra farany. Mila fiomanana ny fahatongavany
Mila manaiky ny fahadisoany ny olona. Ny adin’ny mpino dia tsy ady amin’ny nofo aman-dra. Jesoa irery no azo hianteherana handresena ny hevi-petsin’ny satana rehetra. « Fa izay mihaino Ahy kosa hitoetra tsy manana ahiahy, Eny, handry fahizay izy ka tsy hatahotra ny ratsy. » Ohabolana 1:33
Ny tahotra an’aAndriamanitra dia ny fahendrena hikatsaka ny fanjakan’Andriamanitra. Ahoana ny fikatsahana ny fanjakan’Andriamanitra?
Mila manadio tena, mila fihovam-po, mankato ny didin’Andriamanitra. Andriamanitra no mpandray an-tanana ny ho avin’ny olona matahotra Azy koa apetrao ary meteza ho tantatan’Andriamanitra ny fiananaao ; fantaro fa famindram-po lalandava no ataony.
Ny endry nandray fampianarana avy amin’i Jesoa Kristy dia afaka manavaka tsara sy ny ratsy. Misy andraikitra sy adidiy miandry ny mpanara-dia an’i Kristy dia ny fahalebiazany’ny fahatohorana an’Andriamanitra. Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo fa ny atao rehetra dia entin’Andriamanitra hitsarana anao.
Feon-javamameno fohy taorian’ny toriteny ary nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika.
Tsy nahatanteraka ny tenin’Andriamanitra isika koa mifona. Misaotra Azy noho ny hafatra hoe tsy misy mahalala ny fotoam-pitsarana ka ny fatahorana an’Andriamanitra no mitondra any amin’ny fahendrena. Mifona fa tsy nivelona tamin’ny fitiavana, tsy nanaraka ny sitrapon’Andriamanitra.
Vita izany dia nohiraina ny hira: FFPM 403 “RY JESOA TOMPO TSARA Ô”
Natolotra ny teny famelan-keloka ary natao ny Hira: FF 12 : 2 “NY SAIKO AM-PELATANANAO” mialohan’ny nanononana ny Fanekem-pinoana kristiana laharana faha 4. Nisy feon-javamaneno
Nandray fitenenana ny solotenan’ny katekomena : Nisaotra an’Andriamanitra ny katekomena fa afaka nianatra ihany nandritra ireny fotoana sarotra ireny, nisoatra ny Mpitandrina sy ny mpampianatra ary mametraka eo ampelatan’Andriamanitra ny tohiny rehetra.
RAZAFIMAHARO Mamy no nilaza ny raharaha. Niarahaba manokana ny katekomena.
–	Ny tsara fantarina :
Feno 25 taona.ny SP, amin’ny 10 oktobra ny fankalazana ka noho ny hamehana sia isam-paritra no hanaovana izany.
11 oktobra : Fivoriam-be any amin’ny isam-pitandremana
Ho an’ireo SSAA any amin’ny fitandremana, hankalaza jobily amin’ny taona 2021 : mila alefa ny daty
Eto an-toerana :
200 no afaka manatrika ny fotoam-pivavahana, mila manaraka ny fepetra rehetra. Mila misoratra anarana. In-droa ny fidirana : amin’ny 7ora sy amin’ny 10 ora.
Fahalalana Soratra Masina ity alahady ity. Mitohy ny famakiana ny Filazantsaran ‘ i Jaona. Mitohy koa ny rojombavaka. Fandraisan-tanana sy Fitondrana am-bavaka ny Mpitandrina mivady sy ny ankohonany ny alahady 4 oktobra.
FANENTANANA VAOMIERAN’NY AIM-PANAHY SY FIZARANA FM
RAKOTONIRINA Tsiry solontenan’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy no nandray ny fitenenana.
Enti-mody ny laza-adina ary ny alahady 4 oktobra no hamerenana azy. Alefa taratasy na hafatra miafina (MP) any amin’ny Facebook « Vap Amparibe Famonjena », na mail amin’ny adresse « vap.amparibefamonjena@gmail.com »
Ny hira FFPM 476:1, hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana nanao voady, no natao nandritra ny fanatazana ny rakitra.
Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka FFPM 275 : 1 “RAISONAO, RY TOMPOSOA, NY FANATITRAY” ny rakitra, ho fanavaozana ny fanolorantena.
Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny vavaka fangatahana.
Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nanao ny vavaka fangatahana. Nisaotra an’Andriamanitra izy, misaotra mandrakariva hoy izy, satria mendrika ho Azy izany. Ny fahasoavan’Andriamanitra no maha toa izao.
Tsy misy mahalala ny fotoam-pitsarana fa mila miomana hatrany. Avy nanavao ny fanoloran-tena tamin’ny raki-pisaorana izay entina hampandrosoana ny asan’Andriamanitra.
Mivavaka ho an’ny Fiangonana, ny mitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara
Mivavaka fa amin’ity taona ity dia feno 25 taona ny SP ka mametraka izany eo ampelatanan’ny Tompo.
Mivavaka ho any fahalalana ny Soratra Masina. Na eo ary ny fahasarotana dia natao vaindon- draharaha izany. Mampitombo finoana sy ny fahalalana ny Teninan’Andriamanitra izany sy hahafantarana ny sitrapony.
Mivavaka manokana ho an’ny katemena “Mijoro”. Volana vitsy sisa dia horaisina izy ireo ka tsy hisy ho latsaka an-dalana anie. Mahatsiaro ny Asa Fikarohana sy Fandalinampinoana. Asa makadiry izany ato amin’ity Fiangonana misy anay ity. Mba ho vita sy ho lavorary ka handroso hatrany.
Mivavaka ho an’ny firenena. Mbola ao anaty fotoan-tsarotra ka Ianao Tompo hampandroso amin’ny fahatsarana hatrany. Mivavaka ho ny mpitondra firenena, ny mpitsabo, ny mpitandro filaminana. Ho tanteraka anie fa ianao Kristy dia ho an’ny Malagasy ary ny Malagasy ho an’i Kristy.
Ho eo ampelatanan’Andriamanitra ireo rehetra manana fahasahiranana, ireo mpianatra koa satria ireo ny ho avin’ny Fiangonana sy ny firenena. Mangataka amin’Andriamanitra hijery ireo any ampielezana satria Andriamanitry ny lavitra sy akaiky Izy.
Misy mpanompo mangata-bavaka manokana, misy manao voady fa mandalo ady sarotra ka hiaino hanome fandresena Izy.
Izay tsy takatry ny saina dia angatahina ho tanteraka amin’ny rehetra. Ary izay tsy feno amin’ izao vavaka izao dia akambana amin’ny vavaka tonga lafatra nampianarin’i Jesoa : Rainay izay any an-danitra…Amena
Nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 476: 4 “NY EO AKAIKINAO, RY RAY”, novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira FFPM 338 “AROVY AHO, TOMPO” nofaranana tamin’ny Amena hiraina, nivavaka mangina.
Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Nikirakira ny fafana : RANAIVOSON Joël
Nikirakira ny fanamafisam-peo : RANDRIAMAHEFA Tinarivony
Nikirakira ny oronan-tsary : RABEMANANORO Jonathan
Naka ny sary : RAHARIJAONA Nirina
Nitendry orgue: RAJAOFETRA John Philippe
Alahady 20 septambra 2020
" Miasà amin’ny fahatahorana an’ Andriamanitra "
Ny fotoana faharoa tamin’ny 9 ora no taterina amintsika izao. Ranivoson Toky, Diakona, filohan’ny Sampana Taninketsa no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina,Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo. Ireo ankizy mpikambana ao amin’ny taninketsa no nanao ny vavaka sy namaky ny tenin’ny Soratra Masina.
Alahady natokan’ny fiangonana hitondrana am-bavaka ny Sampana Taninketsa ary ny lohahevitra izay banjinina amin’izao volana Septambra izao dia ny hoe « Miasa amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra ».
Ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra, taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia novakiana teo am-pitsanganana ny I Tantara 16 : 23 – 31.
Nohiraina ny hira FFPM 2 :1,2 « MISAORA AN’I ZANAHARY ».
Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana sy fifonana narahana feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy sy ny tanora.
Zoky Andriambolamanana Toky Mpampianatra ao amin’ny K5 no nanatontosa ny dimy minitra ho an’ny Sekoly Alahady. Ny 1 Samoela 3 :10b no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy : « Mitenena fa mihaino ny mpanomponao ».
Rehefa nantsoin’Andriamanitra I Samoela ka nandre ny fenoy izy dia nihaino sy nanktao izay nolazainy taminy, Samoela sy Andriamanitra dia nifanerasera tamin’ny alalan’ny vavaka toy ny fifaneraserantsika amin’ny ray aman-drenintsika ao an-trano ihany.
Noho izany dia tokony hajaina sy hankatoavina ny ray aman-drenintsika satria izy ireo dia misolo toeana ho Azy. Fadio ny manao tsinotsinona na manao izay manatafintohina azy ireo ihany koa.
Maneka fa miteny amintsika Andriamanitra, ka henoy.
Nitsangana ny fianakaviam-ben’ny Sekoly Alahady ary nohirainy ny FFPM 787 : 3 “ Izay mahakolokolo no manana ny soa “ . Rehefa vita izany dia nanao vavaka ny mampianatra.
Notanterahina avy hatrany ny hira mialoha ny vakiteny dia ny FFPM 210 : 1 – 4 “ Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao “.
Ireo mpikambana avy ao amin’ny sampana taninketsa no nanao ny vavaka sy namaky ny Soratra Masina. Ireto ny perikopa izay novakiana : Eksodosy 18 : 17 – 33 / Matio 18 : 21 – 35 / Titosy 1 : 5 – 9.
Natao ny hira FFPM 305 : 3 : “ O miasà, sakaiza “ mialoha ny toriteny.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra.
Nanatanteraka vavaka fifonana ny mpitarika taorian’ny toriteny.
Taorian’ny vavaka fifonana dia noredonina ny hira FF 35 “RY TOMPONAY Ô AVIA”,
Natolotra ny teny famelan-keloka ary nohiraina ny FFPM 171 : 3 “ JESO MPANJAKA MALAZA ” izay narahana ny fanekem-pinoana laharana fahatelo.
Nisy feon-javamaneno fohy, novakian’i Malala Tiana, mpitantsoratry ny sampana Taninketsa ny tatitry ny sampana. Rehefa vita izany dia nantanteraka hira iray ny STAF : “ MY ONLY HOPE IS YOU “
Novakiana ny andinin-tsoratra masina I Petera 1:17 nanombohana ny filazan-draharaha : «Ary raha Ilay tsy mizaha tavan’olona, fa mitsara araka ny asan’izy rehetra, no antsoinareo hoe Ray, dia mitondrà tena amin’ny fahatahorana mandritra ny andron’ny fivahinianareo etỳ »Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavy ny finoana :
· Natao ny fanentanana ny amin’ny fanajana ny fepetra hamehana ara-pahasalamana efa napetraka : fanasana tanana mialoha ny hidirana, fanaovana aro vava, fanajana ny elanelana iray metatra
· 20 septambra : alahady nato hitondrana am-bavaka ireo sampana mitaiza tanora rehetra
· Mitohy ny fianarana katekomena
· Alahady 26 septambra : manao ny fisintonana kosa ny katekomena manomboka amin’ny 8 ora maraina eto amin’ny tananan’ny fiangonana
· Miverina ny maraim-baovao isaky ny asabotsy maraina
· Zanaky ny fiangonana hiroso amin’ny fanambadiana : Atoa Ramaromandray Tojo sy Rtoa Rabefaritra Domoina
· Alahady 27 septambra : Alahady hanohanana ireo Katekomena
· Alahady 27 septambra : fifaninanana Soratra Masina. Alaina aty am-piangonana ny laza adina, averina ny alahady 04 oktobra ny valiny.
Perikopa hiomanana :
< 10 taona : volana Jona sy Aogositra
11 – 15 taona :Aprily sy Aogositra
16 – 25 taona :Jolay sy Aogositra
26 – 39 taona :Mey, Aogositra ary Jaona 6 sy 7
40 taona mihoatra :Jolay, Aogositra ary Jaona 6 & 7
Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira FFPM 307 and 1-2 “ IZA NO HANOMPO AN’I JESOA SOA”. Ny FFPM 645:4 « JESOSY KAPITENINAY » no nohiraina ho fanolorana ny fanatitra.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka fangantaham-pitahiana. Nentina am-bavaka tamin’izany ireo : krsitianina rehetra eto amin’ny fitandremana Amparibe Famonjena / ny sampana, sampan’asa ary ny asa / ny sampana Dorkasy sy ny sampana Taninketsa / ny fiangonana, ireo mpitondra fiangonana, ny fitaizana any amin’ny toby / ireo zanaky ny fiangonana any am-pihelezana rehetra / ny firenena, fitondram-panjakana sy ireo ambaratonga isan-tsokajiny, ny vahoaka, ireo manana andraikitra amin’ny fahasalamana sy ny fitsaboana, mpitandro filaminana / ireo sahirana, tsy salama, manana manjo, manana hataka manokana sy mangataka vavaka any antokantrano / ny tanora manao ny fanadinana sy mbola hiatrika ny fanadinana. ny fitohizan’ny fianarana.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo : “ Rainay izay any an-danitra … “
Nohiraina ny FFPM 611 :1 « JEHOVAH RAY MALALA Ô » ary niarahana nanonona ny tondrozotra 2020. Natolotra ny tsodrano ary noredonina ny hira FFPM 435 :4 « IZA NO HANOA NY TOMPO LEHIBE » nofaranana tamin’ny Amen. Nisy vavaka mangina sy trinité ary feon-javamaneno.
Nisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.
· Nitarika ny fotoana : Ranivoson Toky, Diakona
· Nitory ny teny : Mpitandrina Raharijaona Solofonirina
· Namaky ny raharaham-piangonana : Rakotomanana Andry, Diakona
· Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Aim-panahy
· Fafana : Rakotoseheno Solofo
· Fanamafisam-peo:Randriamanantena Tiana Arivony
· Mpitendry orgue: Rabiazamaholy Herilanto
· Naka ny sary : Ramahery Hasina
· Nandray an-tsoratra : Ranaivoson Joël
Publié le 13 septembre 2020 20 septembre 2020
Alahady 13 septambra 2020
Ny fotoana faharoa tamin’ny 9 ora no tanterina amintsika izao. Ramilison Diamondra Mpitandrina mianadraharaha no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina,Mpitandrina eto amin’ny fitandremana FJKM Amparibe Famonjena no nitondra ny hafatry ny Tompo. Ramatoa Rabiazamaholy Léa no nanatanteraka ny vavaka ary Ramatoa Rabako Miora no nanao ny vakiteny.
Ny Filipiana no tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.
Alahady ivom-bokatra sampan’Asa Fitoriana ny Filazantsara (AFF) anio araka ny lohahevitra izay banjinina amin’izao volana Septambra izao dia ny hoe « Miasa amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra ».
Ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra, taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia novakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 89 : 8 – 18« Jehovah Andriamanitry ny maro o, iza no mahery tahaka Anao, Jehovah? Ary manodidina Anao ny fahamarinanao. Ianao manapaka ny fisavoan’ny ranomasina; Raha manonja ny alony, dia mampitsahatra azy Ianao. Ianao nanorotoro an-Rahaba ho tahaka izay voavono; Ny sandrinao mahery no namielezanao ny fahavalonao. Anao ny lanitra, Anao koa ny tany; Izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Ianao no nanorina azy. Ny avaratra sy ny atsimo. Ianao no nanorina azy. Ny avaratra sy ny atsimo. Ianao no nahary azy; ny anaranao no ihobian’I Tabara sy Hermona. Manantsandry mahery Ianao; Mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana. Rariny sy fitsarana no fanorenan’ny seza fiandriananao; Famindram-po sy fahamarinana no mialoha ny tavanao. Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly; Jehovah o, amin’ny fahazavan’ny tavanao no handehanany. Ny anarano no hifaniany mandrakariva; Ary ny fahamarinanao no hisandratany. Fa voninahitry ny heriny Ianao; Ary amin’ny fankasitrahanao no hisandratan’ny tandrokay. Fa an’I Jehovah ny ampinganay; Ary an’ny Iray Masin’ny Israely ny mpanjakanay.”
Nohiraina ny hira FFPM 16 :1,2 « AVIA RY VAZANTANY O ». Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana sy fifonana narahana feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy sy ny tanora.
Zoky Rabezandrina Solohery Nirina, Mpampianatra ao amin’ny K5 no nanatontosa ny dimy minitra ho an’ny Sekoly Alahady. Ny Salamo 34:1 no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy : « Hisaotra an’I Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy ».
Tantara fohy momba ny mpanjaka Afrikanina anakiray sy tandapa kristianina no nanatsoahina ny hafatra. Taloha tamin’ny fanjakan’Andriana dia nisy ny tandapa sy ny mpanjaka. Anisan’ny fialamboly tian’ny mpanjaka tamin’izany ny mandeha miaza any anaty ala lavitry ny fanjakany. Tsy maintsy miaraka aminy hatrany ny tandapany amin’izay rehetra alehany. Amin’ny zavatra sy ny fotoana rehetra dia miteny foana ilay tandapa manao hoe : “mahereza sy misaora fa ny zavatra rehetra miara-miasa mahasoa”.
Marihina fa ny mpanjaka dia tsy tia mivavaka, ary tsy afaka ao am-bavan’ity tandapa vontom-pinoana ity kosa ny tsy maintsy hisaotra an’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra satria “miara-miasa hahasoa izany”. Indray andro, raha andeha nihaza ny mpanjaka dia sendra biby masiaka tampoka (tigre) niantoraka taminy. Voavonjin’ilay tandapa ihany ny mpanjaka saingy naratra mafy ary tapaka tanteraka ny rantsan-tanany anakitelo. Nampaherezin’ny tandapa izy sady nanamafisiny ilay teny mahazatra azy hoe:”ny zavatra rehetra mahasoa avokoa”. Tezitra mafy ny mpanjaka ka nampidiriny am-ponja ny tandapany satria nataony fa mbola mamazivazy azy ihany amin’izao fahavoazany izao.
Rehefa sitrana soa amantsara ny mpanjaka diam bola niverina nihaza indray satria tiany loatra izany. Tamin’izany fotoana izany indrindra dia babon’ireo “olon-dia” loza be izy ka nofatorana mba hatao sorona na fanatitra ho an’andriamanitra izay notompoin’izy ireo. Rehefa nodinihin’ilay mpioson-tsampy ity mpanjaka ity dia voatery novotsorana sy noroahina hody any aminy satria tsy mendrika noho izy manana kilema, satria tapaka ny rantsantanany, ka manota fady ny vahoaka nitondra azy tao an-tanana.
Resy lahatra tanteraka ny mpanjaka fa tena marina ara-bakiteny tokoa ilay teny fanevan’ilay tandapa ka navoaka ny gadra izy ary nomena valisoa noho ny hafaliany. Niteny nanontany indray ny mpanjaka nanao hoe : tamin’ny nanagadrako anao ry tandapa, inona no mahasoa ny amin’izany?
Namaly ny tandapa : raha tsy nigadra aho dia tsy maintsy ho tafara-dalana niaraka taminao ihany, ary izaho izay tsy manan-kilema no ho nataon’ireo olon-dia sorona tamin’ny toeranao.
Taorian’ny tantara fohy nataon’i Zoky Solohery Rabezandrina, ary araka ny Perikopa androany dia nanao ny vavaka sy vakiteny tao amin’ny Genesisy 42:18-21 Ramatoa Rabiazamaholy Lea. Ary notohizan’i Ramatoa Rabako Miora ny famakiana ny teny soratra masina tao amin’ny Matio 21: 23-32 ; Filipiana 2 : 12-18.
Ny andinin-tsoratra masina nangalana ny hafatra dia ao amin’ny Epistily nosoratana tany Filipiana 2:14
Fampianarana sy fanentanana ny amin’izao vanim-potoana izao. Hafatra roa no apetraky ny Apostoly Paoly ho fanentanana sy famporisihana antsika ny amin’ny fiantrehany fiverenana amin’ny fiainan’ny fiangonana:
1- Famporisihina ny asa amin’ny fahamasinana kristianina
Araka izany dia hitantsika fa manana fahalemena ny olombelona, misy ihany koa ny tsy fahataterahana. Hita amin’izany ny kilemantsiaka. Hitantsika amin’izany ny fahotana mivaingana ny tantara ny Adama sy Eva.
Maninona no manao ny tsara kanefa ny ratsy ihany no
Misy hafatra telo no azo aseho :
• Asa amin’ny fanekena marina ny Tompo
• Meteza tarihin’ny fanahy masina
• Mahalala fa Andriamanitra no miasa ao amin’ny mino
Misy raim-pianakaviana manakarena mananjanaka roa lahy. Olona samy manahirana ireto zanany ireto.
Zoky : tsy nanaiky ny hanao ny asa, kanefa nibebaka ihany izy taty aoriana.
Zandry : tena handeha, noheverina fa tena zaza hendry, hay manana programa hafa koa.
2- Fananarana sy fanentanana hanao ny asa fanompoana amin’ny fitiavana. Matio 5:16
• Fankatoavana ny baiko izay omen’Andriamanitra
• Mahavita tanteraka amin’ny fahamarinana sy ny fahatsarana rehetra
Natao ny hira FFPM 164 “JESOSY IRERY IHANY”, taorian’ny toriteny. Taorian’ny vavaka fifonana dia noredonina ny hira FFPM 413:3-4 “RY JESOA BE FITIA”, Nohiraina ny FFPM 427 : 2 “HO VAVOLOMBELONAO” izay narahanz ny fanekem-pinoana Nikeana laharana faharoa. Nisy feon-javamaneno fohy, novakian’ny Mpitandrina mianadraharaha Ramilison Diamondra, ny hafatry ny Sampana AFF avy amin’ny foibe,
Novakiana ny andinin-tsoratra masina Zakaria 2-14 no nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavy ny finoana :
• 13 ka hatramin’ny 18 septambra: foana ny fankalazana fihaonambe izay saika atao any amin’ny Toby Soatanana
• Natao ny fanentanana ny amin’ny fanajana ny fepetra hamehana ara-pahasalamana efa napetraka : fanasana tanana mialoha ny hidirana, fanaovana aro vava, fanajana ny elanelana iray metatra
• 13 septambra : mianatra ny katekomena anio alahady.
• Alahady 26 septambra : manao ny fisintonana kosa ny katekomena manomboka amin’ny 8 ora maraina eto amin’ny tananan’ny fiangonana
• Alahady 16 septambra : fanompoam-pivavahana ho an’ny zokiolona sy ireo olona marefo manomboka amin’ny 9 maraina. Angatahana mba hisoratra anarana mialoha ireo maniry hanatrika izany
• Alahady 20 septambra : Sampana Dorkasy sy Taninketsa
• Alahady 27 septambra : fifaninanana Soratra Masina. Alaina aty am-piangonana ny laza adina, averina ny alahady 04 oktobra ny valiny.
Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira FFPM 535 “FINARITRA NY MANOME”. Ny FFPM 275:1-2 « RAISINAO RY TOMPOSOA » no nohiraina ho fanolorana ny fanatitra.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka fangantaham-pitahiana. Nentina am-bavaka:
◦ ny mpitondra fiangonana, mpitory ny filazantsara, ny fitaizana any amin’ny toby, mpianakavy ny finoana, zanaky ny fiangonana eto an-toerana sy any ivelany,
◦ ny birao sy komity ary ny mpikambana ao amin’ny AFF eto amin’ny fitandremana sy manerana ny sahan’ny FJKM,
◦ ny tanora manao ny fanadinana sy mbola hiatrika ny fanadinana,
◦ ny firenena, fitondram-panjakana sy ireo ambaratonga isan-tsokajiny, ny vahoaka, ireo manana andraikitra amin’ny fahasalamana sy ny fitsaboana, mpitandro filaminana,
◦ ireo sahirana, tsy salama, manana manjo, manana hataka manokana sy mangataka vavaka any antokantrano
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.
Nohiraina ny FFPM 622 :1,3 « MBA TANTANO RAIKO O» ary niarahana nanonona ny tondrozotra 2020. Natolotra ny tsodrano ary noredonina ny hira FFPM 625 :5 « MPAMONJY SOA MALALA O » nofaranana tamin’ny Amen. Nisy vavaka mangina sy trinité ary feon-javamaneno.
• Nitarika ny fotoana:Ramilison Diamondra, Mpitandrina
• Nitari-bavaka : Rabiazamaholy Léa
• Namaky ny Tenin’ny Soratra masina: Rabako Miora
• Nitory ny teny: Mpitandrina Raharijaona Solofonirina
• Namaky ny raharaham-piangonana: Mamy Razafimaharo
• Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Fananana
• Fafana : Rajaofetra Arielle
• Fanamafisam-peo:Rabemananoro Jonathan
• Mpitendry orgue: Rabiazamaholy Herilanto
• Nandray an-tsoratra: Raoliarizaka Bakoly
• Naka ny sary : Ranaivoson Joël
Publié le 6 septembre 2020 20 septembre 2020
Alahady 06 septambra 2020
Ny fotoam-bavaka voalohany tamin’ny 7 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao araka ny fandaminana ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana. Andriantsilavina Nofy, Mpitandrina miana-draharaha no nitarika ny litorjia. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana. Alahadin’ny Fivoriamben’ny mpandray ny Fanasan’ny Tompo androany. Nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo amin’ny alahady voalohan’ny volana anio. Solontena 5 avy amin’ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena no nitarika ny hiran’ny Fiangonana.
Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy teny fampidirana dia nisy fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny SAL 111 manao hoe : “ Haleloia. Hidera an’i Jehovah amin’ny foko rehetra aho, eo amin’ny fivorian’ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan’ny Jehovah, ka dinihin’izay rehetra mankasitraka Azy. Madera sady malaza ny asany ; ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay hahatsiarovana ny fahagagana ataony Izy ; miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny hanina izay matahotra Azy ; tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Ny herin’ny asany nasehony tamin’ny olony, tamin’ny nanomezany azy ny lovan’ny jentilisa. Ny asan’ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana ; mahatoky avokoa ny didiny rehetra ; mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, fa natao tamin’ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an’ny olony Izy ; efa nanorina ny fanekeny mandrakizay Izy ; masina sy mahatahotra ny anarany. Ny fahatahorana an’i Jehovah no fiandoham-pahendrana ; fahalalana tsara no ananan’izay rehetra mankato izany ; maharitra mandrakizay ny fiderana Azy ” Noredonina ny hira FFPM 167 : 1-3 “ MIDERA NY ANARANAO ” ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana sy fifonana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina. Natao ny hira FFPM 512 : 2 “ HE ! MATOKY AHO TOMPO. Nitohy avy hatrany tamin’ny 5 minitran’ny ankizy ny fotoana.
Rambeloson Mitsoa, Diakona sady mpampianatra Sekoly Alahady no nitarika. Vavaka no nanombohany izany. Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia I JAO 4 : 18a hoe : “ Tsy manan-tahotra ny fitiavana, fa ny Fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra ”. Fanoharana momba ny fomba fiainan’ny vitsika no natao : ny fanangonana sakafo. Tsy ny tahotra ho bedy no anaovana fanitsiana antsika fa fitiavana. Tokony hiezaka ny hifankatia isika ho fanarahana ny Tenin’i Jesoa. Rehefa manao asa fanompoana isika dia noho ny fitiavantsika an’Andriamanitra ka hanaovantsika ny asany. Tia antsika Andriamanitra, sahia mijoro vavolombelona. Natsangana ny ankizy sy tanora dia nivavaka ny mpitarika. Nanaraka izany avy hatrany ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.
Vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain-dRalison Rakotovao Hanta Harivelo, Diakona. Namaky misesy ny perikopa voalahatra ao amin’ny HAG 2 : 1 -9 ; 14 : 1-9 ; LIO 12 : 16-21 ; I KOR 3 : 10-15 dia Ratovohery Ratobison Lanto, Diakona. Natao ny hira FFPM 460 : 1-3 ” ARIO NY TAHOTRAO “ mialoha ny toriteny.
Ny andinin-tSoratra Masina niompanan’ny hafatra dia LIO 12 : 16-21, izay fanoharana teo amin’i Jesoa Kristy sy ny mpianany, fampitandremana ny amin’ny fiharian-karena diso tafahoatra. “ Ilay mpanankarena adala ” no lohahevitra azo omena ny hafatra. Mizara roa izany.
Nametraka ny anton’ny fiainany tamin’ny hareny ity mpanankarena ity
Ny “ thésoriseur ” (avy amin’ny teny grika) dia olona manan-karembe nefa harena tsy miasa fa mitoby, any amin’ny zavatra tsy mahasoa no itondrany izany anehoany fitiavantena sy fireharehana. Zavatra 3 no fonosin’izany teny izany : jamba io olona io, mitoky amin’ny fitak’i Satana izy, manao ny hareny ho solon’ Andriamanitra. Tsy mby ao an-tsainy ny Tenin’i Jesoa ao amin’ny MAT 6 : 33. Mafy fo sy tsisy fiantrana ihany koa izy, mitady harena sy mampitombo izany hatramin’ny famonoana olona mihitsy aza.
Manao an’Andriamanitra ho tsy misy ity mpanankarena ity
toetsaina mitsambiki-mikimpy no hita eto. Ny Soratra Masina mampieritreritra antsika dia ao amin’ny MAT 6 : 19-20 hoe : “ Aza mihary harena ho anareo eto an-tany, izay misy kalalao sy harafesina manimba, sady misy mpangalatra manami-trano sy mangalatra. Fa miharia harena any an-danitra, izay tsy misy kalalao na harafesina manimba, sady tsy misy mangalatra manami-trano na mangalatra “ Aiza no hiafaran’izany mpanankarena adala izany ? Miasà amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra. Eo amin’ny and.19, ateraky ny fitiavan-karena ny filibana, fandaniana ny herimpo amin’ny zavatra maro tsy mahasoa, manao ny kibony ho andriamanitra izy (mihinana sy misotro), tsy mitsinjo ny fiarahamonina, izay ananany fifaliana amin’ny fiainana mandalo, ny ankehitriny ihany no omeny fahafinaretana satria mila izany ny vatany, tsy manan-tompo ny fiainany, mandeha tsisy tanjona izy tsy mahalala izay hiafarany.
Tokony nitondra fiovana ho antsika ny fihibohana. Misedra olana ara-bola ny synodamparitany sy ny foibe ankehitriny ka mila vonjy, tohana, tanana izy ireo. Hihaino sy hijery fotsiny ve isika tahaka ity mpanankarena adala ity ? Aoka isika hiasa amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra. Mikatsaha ny fahamarinana sy ny fampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra. Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra! Amena.
Nalefa ny hiran’ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena “ Ny fitiavanao anay” (J.S. Bach).
Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika avy eo, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana apostolika (Lah. I) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.
Rehefa izay dia ny vaovaom-piangonana no nambara.
Rakotomanana Andry no nanatanteraka izany. Novakiana ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL 70 : 4 no nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao no santionan’ny asa ilaina fantarina, tadidiana, entina amim-bavaka sy hotanterahin’ny Fiangonana : Nisy .fanentanana ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana
Fanentanana ny Fiangonana avy amin’ny Trano famoaham-boky ANTSO FJKM hanjifa ny fampitaovana amin’ny fidiran’ny mpianatra ho fanohanana ny asan’ Andriamanitra.
Ny hetsika sôsialy ataontsika dia mitohy hatrany. Ar 4 277 000 no voavorintsika ho fanohanana ny asa iombonana.
Miverina mianatra ny katekomena anio.
13 septambra 2020 alahadin’ny sampanasa AFF
Volana septambra : DORKASY – TANINKETSA -Katekomena – fahalalana Soratra Masina
Rehefa izay dia nandray fitenenana ny Mpitandrina. Natsangana ny mpandray nomena ny Teny LIO 22 : 12 ; KOL 3 :2-4. Iainana izany maha-mpandray izany ary mila manana faharetana @izany firaisana izany mba hiara-hiseho @Kristy @voninahitra isika rehefa tonga Izy. Nisy vavaka. Nitohy tamin’ny fanamarihana ny fankalazana tsingerintaona ny fotoana.
FANKALAZANA TSINGERINTAONA VOLANA JONA-JOLAY-AOGOSITRA
Ny Teny nomena ireo mpianakavin’ny finoana natsangana ireo dia ao amin’ny I KOR 21 : 22 “ Omban’Andriamanitra ianao amin’izay rehetra ataonao”. Nisy vavaka ho azy ireo ary nanao fanatitra alitara izy ireo. Feon-javamamaneno no notaterahina nandritra izany. Tsy nisy fandraisan’ny Mpitandrina tanana fa fizarana taratasy fahatsiarovana isan’olona.
Hira natao nandritra ny fanatazana ny rakitra ny FFPM 432 “ MANDRA-PIHAVIN’NY TOMPO “
Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka fanavaozana ny fanolorantena ny FFPM 4 : 4 “ MAMY NY FITIANAO “ ny fanatitra. Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny vavaka fangataham-pitahiana ny fotoana.
Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina no nitarika izany vavaka izany. Ny hiainan’ny Fiangonana ny hafatra nambara nandritra ny toriteny no hataka voalohany. Nentiny amim-bavaka koa ny Fiangonana sy mpitondra Fiangonana ary mpitory ny Filazantsara rehetra ; ny toerana fitaizana ireo niharan’ny tsy fidiny ; ny kristiana rehetra eto amin’ny fitandremana ; ny mpandray ny Fasan’ny Tompo tsy ankanavaka ; ny asan’ny Fiangonana rehetra (ivelany sy anatiny) ; ny sahirana, marary, mana-manjo ; ny firenena ; ny mpiasa rehetra tsy handairan’ny asan’i satana). Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra…” ny vavaka fangataham-pitahiana.
Novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira FFPM 9 : 4 » RY TOMPO ZANAHARINAY » nofaranana tamin’ny Amena hiraina, nisy vavaka mangina sy trinité. Mitohy tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.
FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO
Ho fanomanam-panahy dia ny hira FFPM 183 : 1-3 “ MIDINA RY FANAHY O ! “ no natao. RABENANDRASANA Nandrianina dia nanao vavaka. Ny andininy fahatelo amin’io hira io ihany no nanohizana ny fotoana. Fanatrehana sy fanehoana no nialoha ny famakiana Soratra Masina. Nisy vavaka izay narahin’ny hira A1 « MASINA, MASINA, MASINA ». Rehefa izay, novakiana ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny FFPM 295 : 1 “ MIORENA MAFY TSARA “ dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny mpitarika : nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny vavaka fanetrentena. Natolotra ny Diakona vavy tompon’anjara tsirairay ny mofo ary ny Diakona lahy kosa ny kapoaka, tao anatin’izany no nanaovana ny hira FFPM 305 “ O ! MIASA SAKAIZA “. Nony voazara ny mofo sy kapoakan’ny Fiangonana dia ny Diakona indray ny notoloran’ny Mpitandrina mofo sy kapoaka. Rehefa samy vonona ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia nitsangana ka niara-nihinana ny mofo sy nisotro ny kapoaka. Taorian’ny fahanginana fohy dia ny ampahan-kira 469 « MAMY, RY JESOA NY FITIAVANAO » no natao ary nisy vavaka fisaorana. Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nanaty ny fanatitra, nandritra ny fanatanterahan’ny Fiangonana ny hira FFPM 306 “ MAMAFAZA VOA KA AZA MBA MALAINA “. Nomena ny hafatra avy amin’ny Soratra Masina ao amin’ny I TAN 22 : 16. Natao ny hira FFPM 307 : 1 “ IZA NO HANOMPO AN’I JESOA SOA ? “ mialoha ny fanononana ny tondrozotra 2020 sy fanolorana ny tsodrano. Ny andininy fahadimy amin’io hira io no noredonina avy eo. Nisy vavaka mangina sy fanononana trinité masina dia nirava ny Fiangonana tamin’ny 8 ora sy 43 minitra tao anaty feon-javamaneno.
Nandray an-tsoratra: RALAIARIMANANA Narindra
Nitendry ny orga: RAJAOFETRA John
Nandrindra ny horonon-tsary : RABEMANANORO Jonathan
Naka ny horonon-tsary : RAHARIJAONA RASETAMANANA Solofonirina
Naka ny sary : RAKOTONDRAMBOA Andry
Nikirakira ny fafana : RATIARISON Joris
Alahady 15 Mey 2022
Alahady 08 Mey 2022